China Elastic tontolo iainana fanamboarana sy fananganana efijery | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery fiarovana ny tontolo iainana marefo no fampandrosoana farany an'ny orinasanay ho an'ny fanasokajiana ireo sombintsombiny vita amin'ny fitaovana mando mando miaraka amina fahaiza-manao fanodinana lehibe.
Ny efijery fiarovana ny tontolo iainana marefo no fampandrosoana farany an'ny orinasanay ho an'ny fanasokajiana ireo sombin-kazo matevina matevina miaraka amin'ny fahafaha-manodina lehibe. Izy io dia mikendry indrindra ireo fitaovana izay misy atiny hamandoana ambonin'ny 10% sy ny haben'ny sombiny ambanin'ny 10 mm. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fanasokajiana ara-materialy amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, arina, fitaovana fananganana, herinaratra, famokarana herinaratra, solika ao an-tanàna, fako an-tanàn-dehibe, fanadiovana maloto ary indostria hafa.
1. ny efijery ny masinina fanakonana dia ao anaty boaty efijery tsy mitongilana, ny efijery efijery dia ny vatan'ny referansa hovitrovitra, ary ny boaty fanakona sy ny rakotra tombo-kase dia mijanona.
Ao amin'ny rafitra vibration non parametric, ny loharano mihozongozona dia miorina amin'ny tambajotra vibration parametric, ary ny loharanom-pahavitrihana dia mifandray amin'ny sisin'ny efijery static amin'ny alàlan'ny fifandraisana malefaka malefaka.
2 ny efijery fiarovana ny tontolo iainana elastika dia misy frame roa raikitra, izay tsy miankina,
Mampifandray azy ireo amin'ny zana-kazo lakroa. Ny haben'ny efijery tsy azo ovaina dia apetraka amin'ny hazo fijaliana. Ny tabilao efijery dia misy baffle roa, ary ny hazo fijaliana dia mifandray. Ny takelaka sivana dia misy velarana sivana izay mamorona onja mipoitra ary apetaka amin'ny hazo fijaliana. Ireo zana-kazo roa dia ampifandraisin'ny lohataona mpitari-dalana.
Ny milina fanamoriana dia miaraka amina efijery elastika teleskopika misintona maromaro, ny efijery eo am-panaovana tohana eo amin'ny vatan'ny anatiny sy ivelany.
Eo ambanin'ny hetsika manosika ny fanatonana sy ny fisarahana, ny fihetsika karazana trampolinina amin'ny fialan-tsasatra ambany sy ny fihenjanana miakatra dia miseho eo ambonin'ny harato. Eo ambanin'ny hetsiky ny amplitude amin'ny efijery sy ny fanitarana ny elongation amin'ny efijery, ny fitaovana dia mitohy miakatra eo ambonin'ny catenary, mibontsina ary mianjera amin'ny efijery mba hamita ny asa fandaminana.
1. ny haben'ny efijery dia 40-50 mm, ny haingam-pandeha dia 30-50 g, ary ny amplitude ny fitaovana dia 10 heny noho ny efijery mihetsiketsika mahazatra, izay afaka mamaha tanteraka ireo karazana fitaovam-panodinana sarotra.
2. rehefa mivelatra ho an'ny 0-5mm ny écrast elastika dia hitombo kely ny sakany (fisefoana amin'ny efijery), izay afaka misoroka tanteraka ireo fitaovana maloto mando eo ambonin'ny efijery harato, tsy misy firaiketam-po na fametahana.
3. ny faran'ny fihinanam-bilona amin'ny milina fanamoriana dia misy takelaka buffer, izay afaka mamahana amin'ny fahasamihafana avo lenta, ary ny écran dia manana fahamendrehana avo.
4. ny milina fanamainana maina dia manana tahan'ny fitiliana avo kokoa, ny fahombiazan'ny fitiliana avo kokoa ary ny fahaizan'ny famokarana lehibe kokoa.
5. lamba hovitrovitra, efijery efijery dia tsy mandray anjara amin'ny hovitrovitra, ny lamba fanamafisam-peo static tombo-kase, tsara fiarovana tontolo iainana vokany.
6. ny efijery anatiny dia azo atao amin'ny fomba maro hanatanterahana ny fizahana fitaovana misy fahaiza-manao fanodinana lehibe
7. ny masinin-tsarimihetsika dia mampiasa efijery elastika avo lenta, takelaka fampifangaroana elastika ary fanohanana vita amin'ny akora nafarana.
Takelaka, fitehirizana diaphragm ary rafitra fampitana maotera lehibe, androm-piainan'ny efijery lava (ny serivisy manokana dia voafaritra arakaraka ny fahaiza-manaon'ny milina fanamoriana sy ny toetoetran'ny fitaovana), ary ny milina fanamoriana dia azo itokisana be.
8. ny mekanisma fandefasana dia miasa amin'ny hafanan'ny 10-11.6hz, ary kely ny enta-mavesatra rehetra, izay mety amin'ny karazana rehetra.
Rehefa havaozina ny fitaovana amin'ny toe-javatra mitondra entana, ny herin'ny fiatraikany eo amin'ny fototra dia kely ary tsy misy tranga resonance.
9. ny efijery dia press press, izay haingana sy mety hanoloana sy hitsitsiana ny fotoana sy ny vidin'ny fikolokoloana.
10. kely ny herin'ny motera, izay afaka mamonjy fanjifana angovo 30% raha oharina amin'ny efijery hafainganina.
Manaraka: Fandefasana tontolon'ny tontolo iainana
Sarin'ny fiarovana ny tontolo iainana zara-tariby
Sarimihetsika Vibrating matevina
Mpihinana namana ara-tontolo iainana
Sarimihetsika fihomehezana ho an'ny tontolo iainana
Sarimihetsika mihetsiketsika miaro ny tontolo iainana
Sarimihetsika avo elastika